မြန်မာ့သားကောင်း: အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားနှင်.မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် တို.ရှေ.အပတ် ကုလညီလာခံတက်ရောက်မည်ဖြစ်သော်လည်း တွေ.ဆုံရန်အစီအစဉ်မရှိ
သမ္မတအိုဘားမားနှင်. အမေရိကန်သို.နှစ်ပတ်ကြည်အလည်အပတ်ခရီးရောက်ရှိနေသော မြန်မာ.ဒီမိုက ရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို. သည်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်ရှိ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ရုံးခန်း၌ ယမနေ.ကတွေ.ဆုံခဲ.ကြသည်။ ယခုကဲ.သို.အလားတူ သမ္မတအိုဘားမားနှင်.သမ္မတ၏ဦးသိန်းစိန်တို. ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတက်ရောက်စဉ်တွင် တွေ.ဆုံနိုင်စရာအလားအလာမရှိကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအားကိုးကား၍ အမေရိကန်ထုတ် နယူးယော.တိုင်းသတင်းစာကြီးက ရေးသားထားသည်။
ယမန်နေ.က သမ္မတအိုဘားမားနှင်.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို.တွေ.ဆုံမှုသည် အိမ်ဖြူတော်၌ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နှစ်ဦးတို.၏ ပထမဦးဆုံတွေ.ဆုံမှုဖြစ်ပြီး၊ သမ္မတအိုဘားမားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန်.အနစ်နာခံမှု နှင်. ရဲရင်.သတ္တိရှိခြင်းတို.ကို ချီးကျူးထောပနာပြုခဲ.ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်မှတွေ. ဆုံပွဲအပြီး ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်အရသိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်အပေါ်ချမှတ်ခဲ.သော အမေရိကန်၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုများသည် ရည်ရွယ်သည်.အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိခဲ.ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ကျန်ရှိနေသော အမေရိကန်စီးပွားရေးပိတ်ဆို. မှုများသည်လည်း မလိုအပ်ပါကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားစရာမလိုတော.ကြောင်း အင်္ဂါနေ.ကပြုလုပ်ခဲ.သည်. ဆုလက်ခံပွဲတစ်ခုတွင်လည်းပြောကြားခဲ.သည်။
မြန်မာပြည်တွင်း၌ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင်.နှင်. အမေရိကန်ကုန် ပစ္စည်းများမြန်မာပြည်သို.တင်ပို.ခွင်.ပိတ်ပင်ထားမှုများကို အမေရိကန်အစိုးရမကြာမီက မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများကို တုံ.ပြန်သောအားဖြင်.ဖယ်ရှားပေးခဲ.သော်လည်း ဆက်လက်ကျန်ရှိနေသော စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုဥပဒေများအရ မြန်မာ.ကုန်ပစ္စည်းများ အမေရိကန်သို.တင်သွင်းခွင်.မရရှိသေးပေ။
ကျန်ရှိနေသော အမေရိကန်စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုများကို ထပ်မံဖြေလျှော.သွားဖို.ရှိကြောင်း၊ သို.သော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အတွင်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုနှင်.ပတ်သက်သော တစ်စုံတစ်ရာကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်သွားဖို.အစီအစဉ်မရှိကြောင်း၊ ထို.သို.ကြေငြာလိုက်ပါက ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတက်မည်. မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အားတစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်သွားနိုင်စရာရှိသောကြောင်.ဟု အမည်မဖော်လိုသူ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုသည်။
ယမန်နေ.ကအမေရိကန်အစိုး၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင်. မြန်မာနိုင်ငံပြည်.သူ. လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းတို.အား ၄င်းတို.၏နိုင်ငံရေးအပြောင်းအ လဲပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ချက်များ အားအသိ အမှတ်ပြုသည်.အားဖြင်. သူတို.နှစ်ဦးအား တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ၏စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ.သည်။